कसरी अझ राम्रो अध्ययन गर्न चरण-दर-चरण रूपरेखा बनाउने गठन र अध्ययन
कसरी रूपरेखा बनाउने
माइट निक्यूसा | | अध्ययन प्रविधिको
त्यहाँ धेरै अध्ययन प्रविधिहरू छन् जुन हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। यो महत्त्वपूर्ण छ कि विद्यार्थी राम्रो रूपरेखाको विकासमा संलग्न छन्। अन्यथा, unmotivated विद्यार्थी वास्तवमा योजना को कार्यान्वयनको समयमा समय को फाइदा लिदैन।
तपाईंले जान्नु आवश्यक छ योजना के हो र यो कसरी गर्ने अध्ययनमा यस प्राविधिक प्रयोग गर्न। थप रूपमा, यो राम्रो ध्यान केन्द्रितको लागि उपयुक्त ठाउँ खोज्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ र विषयमा सबै आवश्यक ध्यान तिर्न सक्षम हुनु।
1 कसरी एक रूपरेखा बनाउन?
1.1 अध्ययन को लागी
1.2 Word मा वा तपाइँको कम्प्यूटर मा
2 कसरी सुन्दर वा रचनात्मक रूपरेखा बनाउन
3 स्कीमा के हो?
4 योजना प्रकारहरू
4.3 तेर्सो वा ठाडो योजना
4.4 स्तम्भ योजना
4.5 वर्णमाला योजना
4.6 संख्या योजना
4.7 संयुक्त: अक्षर र संख्याहरू
5 किन स्किमेटिक्स गर्छन्
6 आरेख बनाउन अध्ययनको क्रम
6.1 आकृती बनाउने अध्ययनको क्रम निम्नानुसार हुनेछ:
7 गुण बनाम अध्ययनको मात्रा
कसरी एक रूपरेखा बनाउन?
अध्ययन को लागी
परीक्षाको दिनहरू समीक्षा गर्न हामीलाई सहयोग पुर्‍याउन केही अन्तिम नोटहरू हुनु महत्त्वपूर्ण छ। यो समीक्षा उपकरण सँधै आवश्यक हुन्छ, तर त्यसमाथि जब सामग्री विस्तृत हुन्छ। यस तरिकाले, हामी के सम्झन सक्छौं आवश्यक छ।
स्कीमाहरू, जसले परम्परागत सारांशहरूलाई पूरक गर्दछ, हामीलाई जानकारी सम्झन मद्दत गर्दछ। विद्यार्थीले तिनीहरूलाई आउँदो परीक्षाको मिति भन्दा पहिले समीक्षा गर्न प्रयोग गर्दछ। यो उपकरण एक व्यावहारिक समारोह को सेवा गर्दछ।
कसरी कसरी रूपरेखा बनाउने? यी केहि संकेतहरू हुन् जुन तपाईं अभ्यासमा राख्न सक्नुहुन्छ:
जस्तो कि हामीले पहिल्यै टिप्पणी गरिसकेका छौं, तपाईंले नोटहरू धेरै पटक पढ्नुपर्नेछ र रेखांकित गर्नुपर्नेछ। मार्जिनमा नोटहरू लिन पनि सल्लाह दिइन्छ।
तपाईंको रूपरेखाको लागि एक शिर्षक छान्नुहोस् जुन तपाईंको मुख्य विषयवस्तुलाई पूर्ण रूपमा परिभाषित गर्दछ।
स्पष्ट क्रममा जानकारीको विकास गर्न शीर्षकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खण्डहरू पहिचान गर्नुहोस्।
प्रत्येक खण्डको सामग्री संक्षिप्त र संश्लेषण गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने, फोलियोमा अधिक खाली ठाउँ अझ राम्रो बनाउन केही संक्षेपहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
मुख्य विचारहरू र माध्यमिक डाटा बीच साझा थ्रेड सिर्जना गर्न विभिन्न अवधारणाहरू लिंक गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ थिम फरक गर्न बहु रंगहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यस तरिकाले, यो भिन्नताले तपाईंलाई विशिष्ट सामग्री पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।
यो प्रक्रिया समाप्त भएपछि, कुनै पनि सुधार गर्न बाह्यरेखा समीक्षा गर्नुहोस्। समीक्षा गर्न यो अध्ययन उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि अध्ययन समय गुणस्तरको हो। र रेखाचित्रहरूले तपाईंलाई अधिकतम मिनेटहरू बनाउनको लागि मद्दत गर्दछ तपाईं एक शैक्षिक लक्ष्य मा अझ राम्रो लगानी।
अध्ययन गर्नका लागि उत्तम तरिकाहरू
Word मा वा तपाइँको कम्प्यूटर मा
तपाइँ एक राम्रो रूपरेखा बनाउन को लागी विभिन्न संसाधनहरु को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पेन्सिल र कागज को उपयोग गरेर तपाइँ कहीं यो गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। तर तपाइँ कम्प्यूटर मा सामग्री को विकास गर्न रुचाउन सक्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा, तपाइँ शब्द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्य कसरी सुरु गर्ने? दृश्य मेनू मा सीधा क्लिक गर्नुहोस्, र विकल्पहरु कि यो एकीकृत हेर्नुहोस्। यस खण्डमा तपाइँ योजना खण्ड पाउनुहुनेछ। यसमा क्लिक गरेर, तपाइँ यो संरचना संग कागजात को पाठ हेर्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ।
यस तरीकाले विकसित एक चित्र को दृश्य ढाँचा कुञ्जी वा तीर को एक उत्तराधिकार को बनेको छैन। मुख्य र माध्यमिक विचारहरु को बीच सम्बन्ध तुरुन्तै विभिन्न स्तर मा एक संगठन को माध्यम बाट कथित छ। जब तपाइँ दृश्य खण्ड र शब्द मा रूपरेखा खण्ड मा क्लिक गर्नुभयो, उपकरण पट्टी व्यायाम को आकार को लागी संसाधनहरु को एक विस्तृत विविधता प्रस्तुत गर्दछ। शीर्षक को विभिन्न स्तरहरु को आसपास संरचना सामग्री.
एक राम्रो योजना यसको सिद्ध दृश्य संगठन को लागी बाहिर खडा छ। एक सिंथेटिक तरीका मा प्रस्तुत मुख्य बिन्दुहरु कि मुख्य विषय को आसपास गहिरो। हामीले टिप्पणी गरेका छौं कि वर्ड मा बनेको डिजाइन एक पाठ देखाउँछ कि विभिन्न स्तरहरुमा संगठित गरीएको छ। जे होस्, कार्यक्रम पनि यो सम्भव बनाउँछ लेखन मा एक कागज आरेख बाट विशिष्ट प्रतीकहरु एकीकृत गर्न को लागी। यसको लागी, एउटा नयाँ कागजात बनाउनुहोस्, सम्मिलित मेनू मा क्लिक गर्नुहोस् र आकारहरु खण्ड मा उपलब्ध विकल्पहरु को जाँच गर्नुहोस्.
यो बिन्दु मा क्लिक गरेर तपाइँ ब्लक तीर डिजाइन, प्रवाह चार्ट, लाइनहरु र अन्य आधारभूत आकार को एक विस्तृत विविधता देख्न सक्नुहुन्छ। यस तरीकाले, तपाइँ बिभिन्न संकेतहरु संग योजना को अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ जानकारी को संरचना मा मदद गर्नुहोस्। के हुन्छ यदि एक कुञ्जी को आकार वा तपाइँले चयन गर्नुभएको अन्य चिन्ह कागजात मा धेरै ठाउँ लिन्छ? तपाइँ यसलाई सटीक आकार दिन को लागी यो रूप समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी सुन्दर वा रचनात्मक रूपरेखा बनाउन
प्रशिक्षण र अध्ययन मा हामी तपाइँ केहि प्रस्तावहरु र सिफारिशहरु लाई उद्देश्य प्राप्त गर्न को लागी दिनुहोस्:
पहिलो, प्राथमिकता के साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ: सामग्री। एक स्कीमा को सौंदर्यशास्त्र धेरै सुधार जब जानकारी बिल्कुल संगठित छ। त्यो भन्न को लागी हो, यो एक उत्कृष्ट अघिल्लो तयारी को एक सीधा परिणाम हो। किनकि, त्यो अवस्थामा, त्यहाँ एक दृश्य आदेश हो कि मुख्य बिन्दुहरु लाई जोड्दछ। व्यायाम को दौरान रचनात्मकता बढाउन को लागी, यो सिफारिश गरीन्छ कि तपाइँ केहि ड्राफ्ट को उपयोग गर्नु अघि अन्तिम रूपरेखा को विवरण परिभाषित गर्नु अघि। यस तरीकाले, तपाइँसँग सुधार गर्न को लागी संभावना छ, विकल्पहरुको मूल्यांकन, बिभिन्न डिजाइनहरु को तुलना, केहि सुधार को पहिचान र विस्तार को ध्यान को माध्यम बाट कागजात परिष्कृत। व्यावहारिक अनुभव मूल र सुन्दर योजनाहरु बनाउन को लागी आवश्यक छ।
एक दृश्य छवि संग अवधारणा संगै महत्वपूर्ण शब्दहरु को लागी अर्को चित्रहरु कोर्नुहोस्। अक्सर रूपरेखा पूरा गर्ने प्राथमिक उद्देश्य यो एक परीक्षा को सामग्री को समीक्षा गर्न को लागी एक अध्ययन उपकरण को रूप मा प्रयोग गर्नु हो। पाठ र छवि को उत्कृष्ट संयोजन दृश्य स्मृति र जानकारी को समझ को सुधार को लागी एकदम सही छ। यो योजना को पूरक धेरै चित्र बनाउन को बारे मा हैन, तर एक जानबूझकर तरीका मा यो रचनात्मकता को उपयोग गरी ती पहलुहरु कि कठिनाई को एक उच्च स्तर मा जोड दिन को लागी। चित्र को लक्ष्य के हो? जानकारी स्पष्ट गर्नुहोस्।
टाइपफेस को छनौट पहलुहरु को एक हो कि तपाइँ एक कम्प्यूटर योजना को प्राप्ति मा निर्दिष्ट गर्नु पर्छ। चयन गरिएको फन्ट नेत्रहीन पाठ सुशोभित गर्नुपर्छ तर, यद्यपि सौंदर्यशास्त्र प्रासंगिक छन्, टाइपफेस एक रूपरेखा को मुख्य तत्व होइन। के साँच्चै आवश्यक छ सामग्री र के यो व्यक्त गर्दछ। यो दिमागमा राखिएको हुनुपर्छ ताकि रचनात्मकता बिल्कुल मुख्य उद्देश्य संग पed्क्तिबद्ध छ: विश्लेषण र विषय को समझ को समझ को सुविधा को लागी। उदाहरण को लागी, एक रूपरेखा मा बिभिन्न फन्टहरु को उपयोग अराजकता र दृश्य शोर को भावना बनाउन सक्छ।
एक सुन्दर योजना बनाउन को लागी विभिन्न रंगहरु को उपयोग गर्नुहोस्। चयनित टोन को बीच सद्भाव को लागी हेर्नुहोस्। र, बारी मा, पृष्ठभूमि को बिरुद्ध बाहिर खडा छायांकन छान्नुहोस्। यदि त्यहाँ टोन आफैं र पृष्ठभूमि जसमा यो फ्रेम गरीएको छ को बीच यो स्पष्ट भेद छैन, पढ्न मा अधिक कठिनाई छ।
संक्षिप्तता। एक राम्रो रूपरेखा masterfully एक सानो ठाउँ मा पूरा पाठ को सार संश्लेषण गर्न को लागी प्रबन्ध गर्दछ। यसको लागी, यो पहिचान गर्न को लागी सुविधाजनक छ कि कीवर्डहरु छन् जुन पाठ मा दोहोर्याइएको छ र उनीहरुलाई अध्ययन प्रविधि मा एकीकृत गरीएको छ। पूरा जानकारी पुन: पढ्नुहोस् र ती शब्दहरु वा वाक्यांशहरु कि वास्तविक मूल्य जोड्दैनन्। सबै बाँकी छ कि लिनुहोस्। रूपरेखा को सौंदर्यशास्त्र सुधार जब त्यहाँ अधिक स्पष्टता छ।
तपाइँको परिप्रेक्ष्य बाट रूपरेखा ढाँचा अनुकूलित गर्नुहोस्। जब तपाइँ तपाइँको आफ्नै नोट बनाउनुहुन्छ, एक सारांश बनाउनुहोस् वा एक रूपरेखा बनाउनुहोस्, तपाइँ अध्ययन को विषय मा मनन गर्नुहोस्। यस कारण को लागी, यो अत्यधिक सिफारिश गरीएको छ कि, यद्यपि तपाइँ एक अन्य सहकर्मी को योजना बाट एक सामग्री को समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको आफ्नै विस्तार को विस्तार मा शामिल हुनुहोस्। फन्ट, ढाँचा, रंग वा संकेत हो कि तपाइँ सबैभन्दा मनपर्ने संग योजना अनुकूलित गर्नुहोस्। ती अवयवहरु को उपयोग गर्नुहोस् कि तपाइँ एक सावधान प्रस्तुतीकरण को लागी धन्यवाद के अध्ययन गरीएको छ को बारे मा तपाइँको समझ बढाउन मद्दत गर्दछ।
अन्य योजनाहरु मा प्रेरणा को लागी हेर्नुहोस् जुन एउटा उदाहरण को रूप मा सेवा गर्न सक्छ।
छोटो मा, यो एक सावधान सौंदर्य संग एक योजना बनाउन फारम र सामग्री को बीच सन्तुलन खोज्छ।
स्कीमा के हो?
योजना एक उपकरण हो जुन साधारण थ्रेडको वरिपरि जोडिएका विभिन्न अवधारणाहरू सम्बन्धित छ। यसले विषयको दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान गर्दछ जुन यस तरीकाले संरचित छ, पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ। यस अध्ययन प्रविधिको लागि कुञ्जी संश्लेषण नै हो, यति व्यापक रूपमा स्कूल, संस्थानमा, विश्वविद्यालयमा र सार्वजनिक परीक्षाको तयारी गर्दा। देखि, यो एक मध्यम अनुप्रयोगको क्षेत्र हो।
योजना एक गाईडको रूपमा पनि काम गर्न सक्छ एक कार्य योजना को प्रोम्प्ट्स को अनुसरण गर्न। उदाहरण को लागी, एक उद्यमी एक योजना को एक योजनाबद्ध तरीका मा एक व्यापार योजना बनाने को लागी संदर्भ उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
जब एक छात्र एक अकादमिक स्तरमा स्कीमा प्रयोग गर्दछ, तिनीहरू यो उपकरण सम्बन्धित छ जुन यो प्रतिनिधित्व उल्लेख गर्दछ। यसैले, यो लिंक स्थापना गर्दा, मुख्य विचारहरू संश्लेषण गर्न यो सम्भव छ यस विश्लेषणमा। राम्रो रूपरेखा बनाउनको लागि, यसका विश्लेषण गर्न, यसलाई रेखांकित गर्न र यसको सिंहावलोकन राख्न संक्षेप गर्नु पर्ने सामग्रीलाई ध्यानपूर्वक पढ्नु आवश्यक छ।
रूपरेखाको प्रकार छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई अझ राम्रो समीक्षा गर्न मद्दत गर्दछ। त्यो हो, सबै उपलब्ध ढाँचाहरूको, तपाईं तिनीहरू मध्ये एकको लागि बढी प्राथमिकता हुन सक्छ।
यो लिंक को लागी रोजिएको हो बिन्दु बिचको सम्बन्ध देखाउनुहोस् यो योजनाबद्ध रूपमा वर्णन गरिएको यो प्रदर्शनीको अंश हो। यस अवस्थामा, एक विचारले अर्कोमा तीर मार्फत जोड्दछ जुन लिंकको रूपमा काम गर्दछ। यस ढाँचाको एक लाभ यो हो कि यो धेरै सरल छ, र एकै समयमा, जानकारी पूर्ण रूपमा स्पष्ट गर्दछ।
मुख्य थेसहरु माध्यमिक विचारहरु को तर्क संग प्रबलित छन्। एर्रोको प्रयोगले तपाईंलाई नयाँ डेटाको साथ प्रारम्भिक विचार विकास गर्न अनुमति दिन्छ जुन पूर्ण रूपमा लिंक गरिएको छ। समीक्षाको बखत, तपाई सजिलैसँग अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ जुन प्रत्येक विचारले रेखाचित्रमा ओगटेको छ र यसको प्रस with्गसँग के सम्बन्ध छ। यसको बारेमा कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिनको लागि तपाईले एर्रोको निर्देशन पछ्याउनु पर्छ।
के तपाइँ माथि वर्णन गरिएको पहिलो विकल्पको वैकल्पिक ढाँचा प्रयोग गर्न रुचाउनुहुन्छ? संक्षेपमा, कुञ्जी योजना अघिल्लोसँग मिल्दोजुल्दो छ। जे होस्, तपाईं बिभिन्न बिचारहरूको बीचको सम्बन्ध प्रस्तुत गर्न एक फरक स्रोत प्रयोग गर्नुहोस्। यस अवस्थामा, कोष्ठकहरू यस दृश्य प्रतिनिधित्वको अंश हुन्। यद्यपि यस प्रकारको रूपरेखा स्पष्टसँग एक हो, यदि यस्तो कुरा संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको भए यो धेरै विस्तृत छैन।। प्रतिनिधित्वले अधिक जटिलता प्राप्त गर्दछ जब यो विभेदित वर्गहरूको एक उच्च संख्या प्रस्तुत गर्दछ।
तेर्सो वा ठाडो योजना
रेखाचित्रमा तपाई प्रारम्भिक विचारबाट फरक ramifications देख्न सक्नुहुन्छ। तर प्रतिनिधित्वको प्रकार पनि डेटा संरचना गरिएको तरीकाले भिन्न गर्न सकिन्छ। विचारहरू ठाडो वा तेर्सो रूपमा लेख्नु सबैभन्दा प्रयोग हुने विकल्पहरू हुन्। त्यसकारण यसले पठन अनुभवलाई असर गर्छ। योजनाको प्रकारमा निर्भर गर्दै, पठन पृष्ठको माथिबाट तलतिर वा विपरित, बायाँबाट दायाँ तिर सारिन्छ।
एक रूपरेखा एक अध्ययन उपकरण हो, यसैले, यो एक उपकरण छ कि एक व्यावहारिक उद्देश्य छ। के महत्त्वपूर्ण छ त्यसमा ध्यान दिन सरल ढाँचा चयन गर्न सुविधाजनक छ: विषय बुझ्ने। खैर, यस प्रकारको योजना त्यो एक हो जुन डाटा बिभिन्न भिन्न भिन्न स्तम्भहरू वरपर समूह गर्दछ। तिनीहरू प्रत्येक एक विशेष साझा सूत्रको वरिपरि विचारहरु भेला पार्छ। तर, बदले, प्रत्येक स्तम्भ अन्यसँग सम्बन्धित छ।
यस प्रकारको योजनाले कुञ्जी वा एर्रोको प्रयोग गरेर बिभिन्न विचारहरू लिंक गर्न, वर्णमालाका अक्षरहरू प्रयोग गर्दछ। ठूला अक्षरहरू मुख्य विचारहरू हाइलाइट गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसको विपरित, लोअरकेसले माध्यमिक डाटा परिचय गर्दछ।
अहिले सम्मका सबै योजनाहरूका आफ्नै विशेषताहरू छन्, तर अनिवार्य रूपमा उस्तै छन्। यस प्रतिनिधित्वको उद्देश्य जानकारी स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो। ठीक छ, त्यहाँ डाटा व्यवस्थित गर्न विभिन्न तरिकाहरू छन्: नम्बरहरूले तपाईंलाई बिभिन्न सर्तहरू समूहबद्ध गर्न, उप-विभाजनहरू स्थापना गर्न र प्रत्येक सामग्री संरचना गर्न अनुमति दिन्छ। यस प्रकारको गणना ज्यादै सरल छ।
संयुक्त: अक्षर र संख्याहरू
यो योजनाको प्रकार हो जुन एकल प्रकारका कम्पोनेन्ट प्रयोग गर्दैन, तर माथि वर्णन गरिएको दुईको जोड: संख्या र वर्णमालाको अक्षर। यद्यपि तपाईले उदाहरणहरुबाट प्रेरणा लिन सक्नु हुन्छ प्रारूपबाट राम्रो रूपरेखा विकास गर्न जुन केवल एक प्रकारको संकेत मात्र प्रयोग गर्दछ तपाईं दृश्य दुई सामग्रीहरूको योगको साथ यस व्यायामलाई समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ यो जस्तै, किनकि अक्षर र संख्या एक अर्को पूरक हो।
रूपरेखामा प्रस्तुत विचारहरू क्रमिक रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ योजनाहरु पनि छन् जुन अवधारणाको बीच श्रेणीक्रमको स्तर प्रतिबिम्बित गर्दछ। यस तरीकाबाट जानकारीको एक टुक्रा अर्को भन्दा बढी प्रासंगिक हुन्छ। र यो जानकारी को संगठित गर्ने तरीकामा प्रतिबिम्बित हुन्छ।
जसरी यो सकारात्मक छ कि तपाई अध्ययन र आउँदो परीक्षाको शीर्षक तपाईको आफ्नै नोटबाट समीक्षा गर्नुहोस्, तपाईलाई आफ्नै रेखाचित्र बनाउने पनि सुझाव दिइन्छ। यसको लागी, तपाइँलाई उपयोगी र स्पष्ट छ कि एक ढाँचा चयन गर्नुहोस्.
किन स्किमेटिक्स गर्छन्
केही व्यक्तिहरूले यो व्यायाम बोरिंग पाउँदछन्, तर यो चरणलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। रूपरेखा तपाईं जानकारी व्यवस्थित र यो क्रम मा राख्न मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, यो अर्डर गरिएको संरचनाले विश्लेषण गरिएको सामग्रीको समझलाई सहयोग पुर्‍याउँछ। सबै डाटा, पूर्ण रूपमा जोडिएको, एक राम्रो स्कीमा को संदर्भ मा समझ बनाउनुहोस्।
यो उपकरणले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ व्यवस्थित तरिकामा अध्ययन गर्नुहोस्। र प्रत्येक चरण अनुसरण गरेर, तपाईं पहिले अवधारणाहरू सिक्नुहुनेछ।
आरेख बनाउन अध्ययनको क्रम
राम्रो अध्ययन सञ्चालन गर्न यो योजना थाहा पाउनु आवश्यक हुनेछ जहाँ योजनाको पाँचौं स्थान हुनेछ। एक पटक रूपरेखा पुगेपछि, अध्ययनको सामग्री राम्ररी बुझ्नुपर्नेछ। यस तरीकाले, एक राम्रो रूपरेखा बनाउन सकिन्छ जुन मुख्य विचारहरू हाइलाइट हुन प्रदान गर्न सकिन्छ र त्यो पनि राम्रोसँग अवधारणाहरू सम्झन आदेश गरिएको छ।
आकृती बनाउने अध्ययनको क्रम निम्नानुसार हुनेछ:
छिटो पठन। पहिले, मुख्य शीर्षक के हो भनेर पत्ता लगाउन अध्ययन पाठको द्रुत पूर्वावलोकन गर्नुहोस्। यस तरिकाबाट, तपाईले अध्ययनको उद्देश्यको साथ पहिलो सम्पर्क प्राप्त गर्नुभयो।
सामग्री विभाजित गर्नुहोस् सेक्सनहरूमा शीर्षक बनाउने सेक्सनहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न।
पठन र पाठ को समझ। यस चरणमा, सन्देश बुझ्नको लागि ध्यानपूर्वक पाठ पढ्नुहोस्। डिक्सनरीमा उनीहरूको अर्थ हेर्न तपाईका लागि ती अवधारणाहरू लेख्नुहोस् जुन अधिक जटिल हुन्छ। यस तरीकाले तपाई सम्पूर्ण टेक्स्ट अझ स्पष्टसँग बुझ्नुहुन्छ।
मुख्य विचारहरूलाई रेखांकित गर्नुहोस्। रूपरेखा बनाउनु अघि रेखाचित्र आवश्यक छ। रेखांकनले तपाईंलाई मुख्य विचारहरू छनौट गर्न मद्दत गर्दछ र ती हामीसँग प्रासंगिक छैनन् भनेर त्याग्न सक्षम हुन्छ। रेखांकितलाई धन्यवाद, तपाईं अध्ययन गर्न आवश्यक सामग्रीलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ।
योजना। योजना सफल अध्ययन गर्न सक्षम हुनको लागि आवश्यक छ। यस चरणमा, मुख्य विचारहरू व्यवस्थित गर्नुहोस् जुन तपाईंले पाठमा अधोरेखित गर्नुभयो। यस तरिकाले, तपाईं तिनीहरूलाई सामग्री दृश्य र बुझ्ने आदेश दिन सक्नुहुनेछ।
रूपरेखा पाठ मा जानकारी पूरक। संश्लेषण र स्पष्टता थप्नुहोस्। सबैभन्दा जटिल अवधारणामा डेलिभ गर्न यो उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्।
समीक्षा। आउँदो परीक्षाको सामग्री समीक्षा गर्न यो स्रोत प्रयोग गर्नुहोस्।
यस तरिकाले, यस अध्ययन प्रक्रियाको बखत, तपाईं कुन पक्षहरूलाई अझ बढी सुदृढ गर्न आवश्यक छ भनेर जाँच गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
गुण बनाम अध्ययनको मात्रा
कुनै पनि शैक्षिक चरणमा अध्ययन गरिरहेका व्यक्तिहरूले अध्ययन समयमा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। अर्थात्, कम समय पढ्नु राम्रो हुन्छ घण्टासम्म पुस्तकको अगाडि हुन, तर वास्तवमै यो अस्थायी स्थानको फाइदा लिईकन। अपेक्षित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न समय व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्दछ।
त्यसकारण, प्रेरणा आवश्यक छ पढ्न र रेखाचित्र बनाउन। स्पष्ट र व्यवस्थित रूपरेखाको साथ आउन तपाईंको मुख्य लक्ष्यमा फोकस गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » अध्ययन » अध्ययन प्रविधिको » कसरी रूपरेखा बनाउने
लगभग गाह्रो प्रश्नको लागि धेरै राम्रो उत्तर, राम्रोसँग यो सबै राम्रा सामग्रीमा छ, सारांश र यो बोक्ने प्रस car्गमा, यसलाई सिधा राख्नुहोस्, यसलाई यत्तिको सजिलो प्रश्नको लागि यति स्पिन नदिनुहोस्, कुनै भिमोज र खुशी छैन !! !
अत्रेयलाई जवाफ दिनुहोस्
पालोमा बेलेन आईब्रो भन्यो
म अधिक स्किम विकल्पहरु राख्न ईन्टरनेट चाहान्छु
PALOMA बेलेन CEJAS लाई जवाफ दिनुहोस्
यो विषयको बारेमा बढी व्याख्या गर्न राम्रो हुनेछ
म चाहन्छु कि तपाईले चित्रको धेरै उदाहरण राख्नु पर्छ, कसरी यसलाई बनाउने।
L 83l3n लाई जवाफ दिनुहोस्
MJ जात भन्यो
धन्यबाद, तर म अधिक जानकारी चाहन्छु, त्यहाँ अझै शंकाहरू छन्…। !!!!
MJ कास्टलाई जवाफ दिनुहोस्
म चाहन्छु कि उनीहरूले त्यस विषयमा बढी जानकारी राख्नु पर्छ, त्यसैले यो अधिक बुझिन्छ।
मोतीलाई जवाफ दिनुहोस्
याजैरा ग्वाडलुपे भन्यो
मेरो मतलब, उनीहरूमा के समस्या छ! जो म अधिक जानकारी प्रदान गर्न चाहान्छन्, यस मुद्दा संग अझै धेरै शंका छ। ल।
याजैरा ग्वाडलुपेलाई जवाफ दिनुहोस्
विश्वविद्यालयको निवास भन्यो
हामीलाई कसरी अध्ययन गर्ने वा राम्रोसँग ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना बनाउने वा कसरी सिर्जना गर्ने बारेमा उनले हामीलाई साझेदारी गर्ने लेख धेरै राम्रो छ, योजना बनाउँदा मुख्य कुरा अनुशासन हो किनकि यदि यसलाई लागू गरेनौं भने राम्रो योजना हुनु बेकार हो। र यो verbatim अनुसरण गर्नुहोस्
निवास हलमा जवाफ दिनुहोस्
यो मलाई कसरी विकसित गर्ने यो स्पष्ट छैन कि यति धेरै साना प्राप्त गर्न को लागी धेरै लक्ष्य संग कसरी गाह्रो छ
यो राम्रो Wey थियो
खुट्टा संग तपाईंको अवेला भन्यो
मलाई कच्चा nepe मन पर्छ
खुट्टाको साथ तपाईंको अवेलालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाइँ एक फिजियोथेरापिस्ट बन्न के अध्ययन गर्नु पर्छ?
छनौट कार्ड के हो?